ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7တစ်ဦးရိုမန်းတစ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ကောင်းကင်တမန်သည်သင့်တံခါးကိုလာခေါက်တယ်ခဲ့သည်? သင့်အနေဖြင့်ကံကောင်းသူတွေရဲ့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏, သို့သော်ယခုသင်သည်မီးလျှံထားရန်ရှိသည်. သူတို့အားသည်ထာဝရစုံတွဲများကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? သင်သည်သူတို့၏လမ်းညွှန်မှုအတွက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့ထံမှတစ်ခုခုသင်ယူဖို့ကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်. ဒီနေရာတွင်အောင်မြင်တဲ့ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းကူညီသူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အချို့အကြံပြုချက်တချို့ရှိနေပါတယ်:
ဒါဟာအားလုံးသင်နှင့် ပတ်သက်. မယ်, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆံရေးကကိစ္စရပ်တွေအများကြီးနှစ်ခုမိတ်ဖက်၌မိမိတို့သတင်းရင်းမြစ်များရှာတွေ့’ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု. တကယ်ပါပဲ, တစ်စုံတစ်ဦးကမေတ္တာပါမီ, သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူအပြည့်အဝသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါပြီ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ကြနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားရန်. စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ဖြစ်ခြင်းတစ်စုံတစ်ဦး၏နောက်ကျောတွင်ဝှက်ထားရန်အခွင့်အလမ်းမရ. ပြောင်လက်တောက်ပသောသူ / သူမဖြစ်? သူ / သူမသင်တို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမေးပါနဲ့. အဲဒီအစား, သင်သည်ကောင်းသောပွဲစဉ်ကိုလုပ်နေတာသေချာပါစေ. သူ / သူမလည်းသင်နှင့်တူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူရှိဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်. ယုံကြည်စိတ်ချလွန်းဖြစ်ခြင်းမပါဘဲ, သင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်သင့်ပါတယ်, နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သင်မြင်သောအရာကို.
2. သင့်ရဲ့ငြူစူသောစိတ် Doze
စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်ခြင်းတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်ကိုဦး၌စည်းဝေးကြလမ်းလျှောက်သွားဆိုလိုတယ်. တစ်ဦးချင်းစီကတခြားယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်သင်၏ Self-ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်တစ်ဦး bar တွင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူညနေခင်းထွက်ရှိသည်ဖို့စီစဉ်ထား? သူ / သူမအချို့အာကာသပေးပါနဲ့တူမေးခွန်းများကိုအတူချေမှုန်းရေးကိုသူတို့မကျင့်: သင်ဘယ်မှာရှိနေလဲ? အဲဒီမှာမိန်းကလေးတွေ / ယောက်ျားတွေခဲ့ကြ? ငြူစူသောစိတ်ပင်ပန်းတယ်ဖြစ်ပြီးအကယ်စင်စစ်ပယ်ရှားသူတစ်ဦးဦးကိုပေးပို့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်လိုအပ်ချက်ကာလ၌သင်တို့ကိုအထောက်အကူပြုရန်တစ်စုံတစ်ဦးရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်. အားပေးစကားတွေကို Accept လုပ်ပါ, နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်အလိုရှိသည်သည့်အခါတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူစိတ်သဘောထားချမှတ်. အောင်မြင်တဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အဘယ်သူသည်ဘယ်သူမဆိုရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသင်ပြောလိမ့်မည်ဟု, ပထမဦးဆုံး, ရိုးသားမှုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှမိတ်ဆွေများက supporting, သာနောက်မှ, မိတ်ဆွေတို့ကို.
ငါတို့ရှိသမျှသည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အကျိုးဆက်များခံစား, အိပ်ရာအာလူးသို့သင်နှင့်သင့် Sweety လှည့်သောဤသံချေး. ငါတို့ရှိသမျှသည်အကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဖြည့်စွက်သောငါတို့နည်းနည်းအလေ့အထများရှိသည်, ဒါပေမယ့်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးရဲ့မီးလျှံတက်ထားလိုလျှင်, သင်၏အသက်တာသို့မဆိုစုမပါဘဲနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကစုပ်ယူလိုက်တဲ့ဖို့မကြိုးစား. အတူတူထွက်ရယူပါ, အသစ်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေ. မေတ္တာကိုတစ်ဦးကလေးနှင့်တူကြောင်းကိုသတိရပါ, ကတိုက်ကျွေးရန်လိုအပ်သည်.
ပွင့်လင်းဆက်သွယ်ရေးအားကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအ surefire နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ၎င်းသည်သင့်အားသင်ပိုကောင်းအချင်းချင်းသိလာအောင်ကူညီပေးပါတယ်, သင်ကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. မည်သို့ခံစားရနားလည်ဖို့, နှင့် view ၏တစ်ဖက်သားရဲ့ပွိုင့်ကိုတွေ့မြင်. သဲရဲတိုက်မဆောက်ပါနဲ့! အချင်းချင်း communicate နှင့်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးရဲ့အမြစ်ကိုကွန်ကရစ်အတွက် cemented လိမ့်မည်.
6. ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အအချို့သောအချိန် ယူ.
တစ်ဦးဆက်ဆံရေးကအပ်နှံထားသောအချိန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီမိတ်ဖက်မှတပါးတစုံတခုကိုမျှမပေးနိုင်သည်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ. သင့်အနေဖြင့်သင်၏မိတ်ဆွေများရှိသည်, သင့်ရဲ့ဝါသနာတွေနှင့်သင့်အလုပ်! သူတို့ကိုရန်နှင့်တစ်ဦးတည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်မှအချို့သောအချိန်ရည်စူး. နာရီအနည်းငယ်ခြားသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်မှသင်ပိုမိုအချင်းချင်း miss နှင့်သဘောပေါက်နားလည်စေတော်မူမည်.
ကြည်ဖြူဆက်ဆံရေးမျိုးများအတွက် sane အခြေခံ. တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှုတ်အားဖြင့်သို့မဟုတ် Non-နှုတ်အားဖြင့်သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို communicate နှင့်အတူရိုးသားပါ. ဒီသာသင့် connection အားကောင်းစေတော်မူမည်.